नेपालमा पूँजिवादको प्रदूषित विचारले कम्युनिष्ट संकटमा छ : राम कार्की
काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेश १ का इन्चार्ज राम कार्कीले अब नेपाल शीतयुद्धको भुमरीमा फस्ने र एकदम अफ्ठयारो ठाउँ तर्फ ढकालीने बताएका छन् ।
एमसीसी पास भएको आज करिब २ हप्ता भइसकेको छ र यस्को असर बिस्तारै देखिने उनले एक अन्तार्वार्तामा बताए । नेपाल अमेरिकालाई अड्डा बनाउन दिने स्थितिमा नभएको कुरा चीनले बुझ्नु पर्छ ।
उनी भन्छन, ‘एमसीसीको पक्षमा लाग्ने र विरोध गर्ने धेरै देखा परे तर नेपालको आफ्नै विकासको रणनीति हुनुपर्छ भन्ने मुद्धा चहि उठाउने कोहि भएनन्,’ ।
हिजोको दिनमा सबै पार्टीहरु आन्दोलनमा र सिद्धान्त निष्ठ थिए तर अहिले कुनै पर्टीले सिद्धान्त नबोकेको हुदा पनि देश सहि ठाउँमा नभएको उनले बताए । आफ्नो मर्यादा र जिम्मेवारी बिर्सेको हुदा देशको हालत खराब बन्दै गएको छ ।
उनले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तवार्ताको अंश :
के माओवादी संगठन या पार्टी छ ? : ६४/६५ सालको तुलनामा मओवादी अहिलेको अवस्थामा छैन् । माओवादीले राम्रो अवसर पाएको थियो ।
नेपाली जनतामा एउटा नयाँ आसा, विश्वास र जागरुत थिए तर प्रचण्ड कमजोर हुनु भयो किनभने ज्ञान, चेतना र नयाँ विचार आउनका लागि पुराना विचारको अध्यान गर्न बिर्सनुभायो ।
प्रचण्ड के ‘वान म्यान’ कमाण्डर हुन कि हैनन् ? : माओवादी पर्टी एउटै व्यतिको आदेशबाट चलाउन अब सम्भव छैन् । हिजोसम्म प्रचण्डसँग एउटा अधिकार थियो तर अहिले माओवादी बेग्लै परिवेश, परिस्थितीमा आइसकेको छ र अब नेतृत्वको भुमिका पनि बग्लै हनुपर्छ ।
के माओवादी विघटनको दिसामा छ ? : पार्टी सिद्धान्तनिष्ट छैन, सिद्धान्तको लट्टाइमा उडिरहेका चङगाहरु जब चुडिन्छन त्यो बिस्तारै भिइमा नै झर्छ ।
पूँजिवादसँग झम्काभेट भएकोले सबैको सोच, विचार र सिद्धान्तलाई प्रदूषित गर्दियो । पूँजिवादको चरित्र भनेको हिंसा, असम्मानता, भेदभाव र अस्थिरता हो जस्ले गर्दा विकासका पाहिलाहरु मेटिदै गए ।
नेपालमा कम्युनिष्ट छन ? : नेपालमा कम्युनिष्ट संकटमा छ र यस्को कारण भनेको नै पूँजिवादले प्रदूषित पारेको विचारहरु हुन् । सामन्तवादसँग लडे तर पूँजिवादसँग लड्ने आट गरेनन् । बन्दुक बोक्दा मात्र कम्युनिष्टको भावमा डुबिन्छ ।